Xubno ka mid ahaa Al Shabaab oo lagu Dilay Gobolka Bari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay hawlgal qorshaysan in ay ku dileen 19 xubnood oo ka tirsan Ururka Al-Shabaab ee ku sugan Buuraleyda Galgala ee gobolka Bari ka dib howlgal halkaasi ay ka fuliyeen Ciidanka Puntland.
War kasoo baxay Taliska Ciidanka Puntland ayaa lagu xusay in sidoo kale lagu dhaawacay howlgalkaasi xubno badan oo Shabaab ka tirsan.
Goobaha uu howlgalka ka dhacay ayaa kala ah Degaannada Madarshoon, Karin-xagarood, Mariidle iyo Diindigle ee buuraleyda Calmadow.
“Ciidamada SF waxay hawlgalkan ka gaareen guulo muhiim ah, waxay na Al Shabaab ka dileen intii 19 xubnood , iyaga oo tiro kale oo intaa ka badan oo Al Shabaab ahna dhaawacyo gaarsiiyey,sidoo kalena ciidamada PSF waxay ka gubeen Al Shabaab raashin ay kaga carareen goobihii ciidamadu ku weerareen” ayaa lagu yiri qoraalka.
Ciidanka Ammaanka maamulka Puntland ayaa howlgallo Ballaaran ka bilaabay degaano ka mid ah gobolka Bari oo ay ku sugan yihiin Shabaab iyo Daacish.
Maxkamada CQS oo xukun ku ridday Rag ka tirsan Daacish